एमाले नेताहरुलाई सात करोड दिएर सभासद् नियुक्त भएकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले मुख खोलिन | Canadian Reporters
Posted on October 25, 2015 , updated on October 27, 2015 by क्यानेडियन रिपोटर्स
कार्तिक ७, २०७२- व्यापारिक घराना गोल्छा परिवारकी बुहारी राज्यलक्ष्मी गोल्छा एमालेबाट समानुपातिक कोटामा सभासद् नियुक्त भएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा अनुपस्थित भएको भन्दै एमालेले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । तर, गोल्छा आफू राजीनामा नदिने बताउँछिन् । भन्छिन्,‘म बिरामी भएर अनुपस्थित भएकी हुँ ।’ आफ्ना पति स्वर्गीय महेन्द्रकुमार गोल्छाले एमालेमा गरेका आर्थिक–सामाजिक लगानीका कारण आफू सांसद चुनिएको उनको दाबी छ । कुराकानीका क्रममा उनले एमालेका विभिन्न तहका नेतालाई आर्थिक सहयोग गरेको दाबीसमेत गरिन् । प्रस्तुत छ कान्तिपुरका दीपेन्द्र विष्टले उनीसँग गरेको कुराकानीको सारांश :
तपाईंलाई एमालेले आफ्नो कोटामा किन सभासद बनायो ? तपाईको पार्टीमा योगदान के थियो ?
महेन्द्रकुमार गोल्छाको सुमन प्याकुरेल, सुवोध प्याकुरेलसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो, जब मदन भण्डारीले ‘श्रम कानुन’ लागू गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो, त्यो बेला महेन्द्रकुमार उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्ष हुनहुन्थ्यो । श्रम कानुन लागू गर्ने विषयमा महेन्द्रकुमारको ठूलो योगदान छ । त्यसले गर्दा म एमालेमा प्रवेश गरेकी हुँ । किनकी महेन्द्रको नामलाईम निरन्तरता दिन चाहन्थे । भरतमोहनजी अर्थमन्त्री हुँदा महेन्द्रजीलेश्रम कानुन लागू गर्न र अर्थनीति बनाउनमा योगदान गरे । त्यसैले मेरो झुकाव बढी एमालेप्रति थियो ।
म सुरुदेखि भन्छु । केपी सर र माधव नेपाल सरले कहिल्यै केही माग राख्नु भएन । महेन्द्र गोल्छाकै योगदानका कारण उहाँहरुले मलाई पार्टीमा ल्याउनुभयो । सभासद बनाउनुभयो । तर पार्टीमा झलनाथजी र पार्टीका अन्य व्यक्तिले सिधै पैसाको कुरा गरे । त्यो कुरामा मलाई चित बुझेन । किनभने पार्टीमा केपी र माधव नेपाल जस्तो व्यक्ति पनि हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुको म सम्मान गर्छु जसले कहिल्यै पैसाको कुरा गर्नुभएन । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको कारण पनि मलाई हटाउन खोजेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चुनाव सहभागी हुन भएन, उल्टै पार्टीको नीति विपरीत मधेसको मुद्दालाई सहयोग गर्नुभयो भन्ने आरोप तपाईंलाई छ नि ? पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण यस्तो आरोप लगाइएको हो । मैले पार्टी हितविपरीत कुनै काम गरेकी छैन । मेरो स्वास्थ्य स्थितिको कारणले उपस्थित नभएको हुँ । विगत १० महिनादेखि मेरो स्वास्थ्य ठीक छैन, म विरामी छु ।मुटु र खुट्टाको समस्या छ । यो सबैलाई थाहा छ । पटकपटक प्रमुख सचेतकलाई जानकारी गराएकी छु ।संविधान घोषणाको बेला वेड रेष्टमा थिएँ, यो कुरा विद्या भण्डारीजीलाई थाहा छ । उहाँले विराटनगर मेरै घरमा आएर मलाई भेट्नु भएको हो । यस्तो स्थितिमा पनि म अन्तिम दिन हस्ताक्षर गरेर विराटनगर फर्के । प्रधानमन्त्री चुनावको दिन नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बुक गरेको थिएँ, एयरपोर्टमा अचानक मेरोमा स्वास्थ्य खराब भयो, मलाई त्यहींबाट हस्पिटल लगियो । डाक्टरले रेष्ट गर्नु भने तर मैले केपीओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएकाले म जसरी पनि जानुपर्छ भनें ।तर,जान सकिनँ । दोस्रो दिन उपचारको लागि बागडोगरा (भारत) गएँ । सभामुख निर्वाचनको दिन उपस्थित भएँ ।
केही युवा संघ सम्बद्ध व्यक्तिहरु हुन् । मलाई काठमाडौं प्रवेश गरेपछि ज्यान जोखिममा हुने भन्दै धम्की दिए । यो कुरा मैले केपी सर, माधव नेपालसँग गरेकी छैन। पार्टीमा मेरो आर्थिक लगानी पनि ठूलो छ भन्दै हुनुहुन्छ ।
कति जति छ ?
मैले पार्टीलाई१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ स्वेच्छाले सहयोग गरेकी छु ।जम्मा गरी मैले सात करोड रुपैयाँ बुझाएकी छु । त्यसैगरी, संविधान सभामा निर्वाचनमा मैले पार्टीलाई शारीरिकश्रम तथा ठूलो आर्थिक सहयोग गरेकी छु । म एक मधेसी महिला, एकल महिला, उद्यमी महिला हटाएर पार्टीले कुनै ठूलो काम गरेजस्तो लाग्दैन । यसले पार्टीको बद्नाम गरिसकेको छ । मलाई पार्टीले आन्तरिकरुपमै हल खोजेको भए हन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो । संचारमाध्यमसँग बोल्न बाध्य बनायो ।
मेलै सम्पूर्ण कुरा त्यागेर महेन्द्र गोल्छासँग बिवाह गरेकी हुँ । महेन्द्रले पार्टीमा गरेको योगदानबारे मेरै किताबमा सुबोध प्याकुरेलले खुलेरै लेखेका छन् । मलाई पार्टीले किन हटाउन खोज्दैछ म जवाफ माग्न चाहन्छु । यो लडाईं लडेर मात्रै म पार्टीबाट बाहिरिन्छु । सभासद बनाउन पैसाको कुरा गर्ने को थिए ? झलनाथ खनालले सिंधै पाँच करोड सहयोग नगरे सभासद बनाउन नसक्ने कुरा गरे । त्यो बेला गंगाधर तुलाधरसँगै थिए । अनि, गोविन्द थापालेपनि १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगेका छन् । अरु कुरा सार्वजनिक गरेपार्टीमा ठूलो घाटा हुने भएकाले आवश्यक परे सार्वजनिक गरौंला । मसँग सबै प्रमाण छ । अहिले म सार्वजनिक गर्न चाहन्नँ । युवा संगठनका भूपाल राई, परशुराम बस्नेत र निरु पाललगायतले ६२ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । बकाइदा लिखित रुपमा दिएका छौं । विनोद ढकाललाई २५ लाख रुपैयाँ, राजविराजका सुमन प्याकुरेल र उनकी छोरी सुज प्याकुरेल, उनकै छोरा सुयसको घरमा केपी सर गएकै बेला विनोद ढकालहरुले बार्गेनिङ गरेर ५० लाख रुपैयाँ, ऋषि पोखरेलले १० लाख रुपैयाँ लगे । त्यो क्षेत्रका केपी ओली सर्मथकलाई ५ लाख रुपैयाँ भन्दा मैले कम सहयोग गरेकी छैन । केपी ओली प्यानलका गोविन्द थापा, सुमन प्याकुरेल, गोविन्द ढकालहरुले महिलाको व्यवसायिकीकरण गर्ने काम गरे ।
झलनाथ खनाललाई एकजना राईथरका भाईमार्फत आर्थिक बाहेक उनको निर्वाचन क्षेत्रमा इलाम जानआउन कति सहयोग गरे भन्ने लेखाजोखा नै छैन । उनले महेश रेग्मीकै अगाडि फोनमार्फत व्यक्तिगत २ करोड रुपैयाँ सहायोग गर्नुपर्ने धम्की दिए । ईश्वर पोखरेललाई सहयोग गरें । गोकर्ण विष्टलाई १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी । त्यसैगरी, विद्या दिदीलाई २५ लाख रुपैया दिएँ । उहाँलाई मैले आफ्नै नाममा चेक काटेर दिएकी छु । उहाँकै नाममा काट्न खोजेकी थिएँ, मान्नु भएन । गंगाधर तुलाधरमार्फत माधव नेपाललाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरें । पार्टीको माथिल्लोस्तरका सबै नेतालाई सबैलाई सहयोग गरेकीछु ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित: कार्तिक ७, २०७२
Bring Back Manufacturing (Watch Video)